नेपाली नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा ओपोको फोन नयाँ मूल्यमा नेपाली नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा ओपोको फोन नयाँ मूल्यमा - Akhabar Nepal नेपाली नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा ओपोको फोन नयाँ मूल्यमा - Akhabar Nepal
नेपाली नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा...
नेपाली नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा ओपोको फोन नयाँ मूल्यमा
२०७७, २० चैत्र शुक्रबार १७:०३
काठमाण्डौ: नेपाली नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा ओपोले ए१२ ३ जीबी फोन नयाँ आकर्षक मूल्यमा उपलब्ध गराएको छ । ओपोले नेपाली नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा २०७८ लक्षित थप आकर्षक अफरहरु सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएको हो ।
सन् २०२० को अगास्ट महिनामा सार्वजनिक उक्त फोनको चौडाइ ८.३ एमएम र वजन जम्मा १६५ ग्राम रहेको छ । कम्पनीले पहिले रु. १६ हजार ५९० मूल्य रहेको उक्त फोनमा मूल्य समायोजन गर्दै अब रु. १४ हजार ९९०मा उपलब्ध गराएको छ । उक्त फोन नेपाली बजारमा कालो र नीलो गरी दुई रङमा उपलब्ध रहेको छ ।
ओपो ए१२ ३जीबीको ७२०×१५२० पिक्सेल्स सहितको ६.२२ इन्चको डिस्प्ले उपलब्ध छ। फोनको पिक्सेल डेन्सिटी २७० पीपीआई रहेको छ। आईपीएस प्यानल सहितको यो फोनको एस्पेक्ट रेशियो १९:९ रहेको छ। फोनको स्क्रिन टु बडी रेसियो ८९ प्रतिशत छ। फोनको डिस्प्लेमा क्याप्टिभेटिभ, मल्टी-टच, इन-सेल, २.५डी कभ्र्ड ग्लास स्क्रिन, कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास थ्री रहेको छ ।
यसमा डुअल रियर क्यामेरा सेटअप उपलब्ध गरिएको छ । यसमा १३एमपी क्षमताको प्राइमरी क्यामेरा र सेकेण्डरी क्यामेराका रुपमा २.०एमपी क्षमताको क्यामेरा जडान गरिएको छ। यी क्यामेरामा टच-टु-फोकस, फेज डिटेक्सन एएफ अटोफोकस प्रविधि पनि उपलब्ध गरिएका छन्। फोनमा रहेको रियर क्यामेरामा डुअल एलईडी फ्ल्याशको पनि प्रयोग गरिएको छ। त्यसैगरी सेल्फीका लागि फोनमा ५एमपी क्षमताको फ्रन्ट क्यामेरा जडान गरिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा आइएमई रेमिट सम्मानित